admin – hoo!haa!!
Legọs – Aka ndị Uwe Ojii nọ na Legọs Steeti akparala Babatunde Adeyeye, nwata akwụkwọ na Mahadum Legọs Steeti, onye mebere onyonyoo wusara ebe nile, ebe ọ na-esusu nwatakịrị nwanyị dị afọ atọ ọnụ. Ndị Uwe Ojii jidere ya bụ ekperime n’ụlọ ya dị n’Okporo Ụzọ Kajola na Shagamu, OgunRead More →
Owere – Ndị ụlọ ọrụ nchekwa DSS akpụpụla Mazi Ambrose Nwaogwugwu, Onye Nlekọta ngalaba Mgbasa ozi ọbaozi nke ótù ndọrọndọrọ ọchịchị PDP ụlọikpe majie n’Owere maka iyi ọha egwu (terrorism) na nkwutọ aha maka edemede ya n’ọba ozi Facebook megide Gọvanọ Hope Ụzọdịmma nke Imo Steeti. N’akwụkwọ nwelite ikpe nkeRead More →
Enugwu: Òtù Green Environment Network nọrọ ụnyahụ malite ịkụ ukwu osisi karịrị ótù puku n’okporo Ụzọ, Zik’s Avenue, Enugwu, iji mee ncheta ụbọchị Gburugburu nke Mbaụwa na-abụ n’abalị ise nke ọnwa Juun kwa afọ. Onye malitere mmemme ịkụ ukwu osisi ahụ bụ Kọmishọna Enugwu Steeti na-ahụ maka Mgbasa Gburugburu nakwaRead More →
– Anyị atụkwasaghịkwa ndị Gọvanọ Ala-Igbo obi – Igboayaka Owere – Òtù Ohaneze Youth Council (OYC) enyela ndị Fulani ntimiwu ka ha si n’ọhịa nile nọ n’Ala-Igbo kwapụ ozigbo. Nkea bụ isiokwu sitere n’ọgbakọ pụrụ iche ndị òtù a nwere n’Owere, Imo Steeti ụbọchị Tọọzdee banyere ọnọdụ nchekwa Ala-Igbo. N’okwuRead More →
Ọka – N’agbanyeghị mgbaghara nile ọ rịọrọ, aka ndị Uwe Ojii akparala Onye amụma Chukwuemeka Ọhanyere “Odumeje”. Ụbọchị Tuuzdee, Odumeje nọtere aka n’isi ụlọ ọrụ Ndị Uwe Ojii n’Anambara Steeti n’Ọka. “Liquid Metal” bịara ịzara ọnụ ya maka ebubo okwu na-akpalite ọgbaghara, okwu na-emebi ihe, okwu akpọmasi, Mkparị na nkwutọRead More →
ONYE ỌRỊA EJIRILA SỊGA SEGBUO ONWE KA SỊGA YA SUNYERE ỤLỌ ỌGWỤ ỌKỤ
Ọkụ ọgbụgba dapụtara n’ótú ụlọ ọgwụ dị n’obodo St. Petersburg na mba Rọshịya ụbọchị Wenezdee agbagbuola ótú onye ọrịa, onye, butere ọkụ ahụ site na idina n’àkwà ya na-ese sịga. Site n’ozi si n’aka ụlọ ọrụ mgbasa ozi mba Rọshịya bụ TASS, nwoke ahụ bụ onye a na-agwọ maka ọrịaRead More →
ARA: “INSPECTOR” AGBAGBUOLA ONYE UWE OJII IBE YA
Legọs – Inspector Monday Gabriel, nọrọ Sọnde gbagbuo onye òtù ya, Sargeant Felix Okago, n’Ikoyi, Legọs Steeti. Ozi hoo!haa!!nwetara na-ekwu na ndị Uwe Ojii ahụ nọ ọrụ nche n’ótú ụlọ ọrụ Gọọmenti Etiti dị n’Ikoyi tupu jiri bịa Inspector ahụ n’ísí nke mere ka ọ gbawa egbe aghara aghara weeRead More →
TỤFỊAKWA! E JIDELA ỤMỤ NWOKE IRI N’ÓTÚ DINARA NWATAKỊRỊ DỊ AFỌ IRI N’ABỤỌ N’IKE
Dutse – Ndị Uwe Ojii na Jigawa Steeti ejidela ụmụ nwoke iri n’otu ndị a na-ebo ebubo idina nwatakịrị nwanyị dị afọ iri n’abụọ n’ike. Ndị okenye arụrụ ala ndị a, site n’ozi hoo!haa!! nwetara dinara ya n’ụbọchị dị iche iche. Ikekwa, onye gaa pụta, ọ kọọrọ ibe ya. AkaRead More →
MAJEK FASHEK ANWỤỌLA N’ỌRỊA CANCER
Legọs – Ọnwụ egbuola Majekodunmi Fasheke, onye a maara dịka Majek Fashek, ochie dike egwu Reggae na Naịjiriya. Majek na Cancer bụ ihe mechara taa isi ya gbara mgba afọ ole m’ole tupu ọ nwụọ ụnyahụ na Nu Yọk. Onye Nlekọta ya, Omenka Uzoma, tinyere ozi ahụ n’ọba ozi mmekọrịta InstagramRead More →
“ỊJỌ SỊ NA HA KWỤỤRỤ ONWE HA, NA HA ABỤGHỊ BỊAFRA, HA BUSO NAỊJIRIYA AGHA KA ANYỊ HỤ” – BNYL
Kalaba – Osote Onyeisi òtù Biafran National Youth League (BNYL), Ebuta Takon Akor echeerela ndị Ndintorọbịa ndị Ịjọ, Ijaw Youth Council (IYC) akamgba ma gwa ha ka ha gaa luso Naịjiriya agha, iji gosi na ha nwere ike ikwudo sọọsọ ha na Mpaghara Naịja Delta. Akor kwuru nke a makaRead More →
Ọ BỤ ỤJỌ MERE ODUMEJE JI RỊỌ ỤMỤ PERICOMO MGBAGHARA?
Ọnịcha – Onye amụma Chukwuemeka Ohanaemere, nke a maara dịka Odumeje arịọla Ụmụ Pericomo nakwa ndị Arọndizuọgụ, Imo Steeti mgbaghara maka ịsị na ya ga-emechi mmemme Ikeji ndị Izuọgụ. Ọtụtụ mmadụ na-ajụzị ma ọ bụ ụjọ mere “The Liquid Metal” “The Lion” jiri rịọ Ụmụ Pericomo biko ka ọ bụRead More →
Kalaba – Òtù Biafra Nations Youth League (BNYL) ekwuola n’abalị isii nke ọnwa Nọvemba afọ nile ga-abụzị ụbọchị ncheta Ọchịagha Filip Efiọng, onye bụ Osote Ọchịagha Emeka Ọdụmegwu Ojukwu dịka Onyeisiala Bịafra, ma mechaa bụrụkwa Onyeisiala Bịafra. Efiọng, ochie dike hụrụ Ndigbo nakwa ndị Biafra ndị ọzọ n’anya nke ukwuuRead More →
Legọs – Njinji jiri ụbọchị Tọọzdee n’Okporo Ụzọ Jọnsịn (Street) dị n’Alaba, Legọs, oge Chisom Eze, dị afọ iri abụọ n’otu sụgburu nwanne ya nwoke, Henrị, dị afọ iri n’itolu ebe ha na-alụ ọgụ maka ekpem FANTA! Ozi hoo!haa!! nwetara na-ekwu na Chisom hapụrụ ekpem Fanta ahụ were pụọ iro.Read More →
Ezigbo ọgụ na-ada n’etiti ụmụ ásá nile nọ n’ọba ozi mmekọrịta dị iche iche na Naịjiriya ugbua. Ma Facebook, ma Twitter ma Instagram. Ọ bụ BRUNO Chigọzie Ọpara kpatara ya. Kemgbe ya bụ nwa-afọ Imo Steeti, onye mara mma ma nwekwaa akpụ obi dịka C. Ronaldo tinyere onyonyoo ya n’ọbaRead More →
Enugwu – Òtù Igbo Renaissance Forum (IRF) agbarụọla ihu banyere etu ndị Gọvanọ Mpaghara Ọwụwa Anyanwụ si ghara ikwu banyere ndị Ugwu Awụsa na-amịbatasi n’Ala-Igbo n’oge ugbua a machiri njem n’etiti Steeti na Steeti maka ọrịa koro. Akwụkwọ ozi IRF degaara ndị Gọvanọ Mpaghara Ọwụwa Anyanwụ nke Onye Nlekọta UkwuRead More →
Bauchi – Nwagbọghọ nta dị afọ iri n’asaa, Salma Hassan, asụgbuola di ya, Mohammed Mustapha, maka ịmanye ya amanye ka ha nwee mmekọahụ n’abalị agbamakwụkwọ ha. Ọ gwara ndị nta akụkọ n’isi Ụlọ ọrụ Ndị Uwe Ojii Steeti ahụ na Bauchi na ya amaghị ụma were gbuo di ya. MazịRead More →
Ótù nwoke yi mkpuchi ihu N95 esugwoola ụgbọala ya, ka ume sọrọ ya ebe o ji ụgbọala agba n’ụzọ na Lincoln, California, mba Amerịka. Ozi si n’aka ndị Uwe Ojii nke ngalaba Lincoln Park Police, kwuru na iyi mkpuchi ihu N95 ogologo oge nwere ike ibelata ikuku (oxygen) mmadụ na-ekwuruRead More →
ỌGBAGHARA GA-ADỊ MA NDỊ OSHIMILI CHỤPỤ ANYỊ N’ỌHỊA HA- ỌKAIWU IDRIS
Asaba – Okaiwu Idris Abubakar, Odeakwụkwọ Mgbasa ozi nke òtù ndị ọkàiwu ndị Alakụba na Delta Steeti, ekwuola hoo!haa! na ntimiwu nchụpụ ahụ nke Okpuru Ọchịchị Mgbago Ugwu Oshimili nyere ndị Fulani na-achị ehi bi n’ọhịa ga-ebute ọgbaghara ma mebikwaa ihe. N’okwu ya oge ndị Fulani bi n’ebe ahụ mereRead More →
Ọka – Sinetọ Dọkịnta Kris Nwabụeze Ngige, Mịnịsta Naịjiriya na-ahụ maka Ọrụ nọrọ na nso a were nye ndị obodo ya bụ Alọ, n’Okpuru Ọchịchị Ndịda Idemili nke Anambara Steeti ngwa nbelata nhịamahụ ọrịa koro. Ngige mere nkea site n’ótù Sen. Chris Nwabueze Ngige Foundation, Alor London. Ihe o kereRead More →
Owere – Ụfọdụ ndị mmadụ na-ekwu na ọ bụ ísí mgbaka mere Dọkịnta Tiofilọsụ Okere, onye bụbu Onye Nlekọta ụlọ mgbasa ozi Imo Broadcasting Corporation (IBC), Owere ji sụgbuo nwunye ya. Okere, onye dị afọ iri asatọ n’ise nọrọ ụnyahụ na be ya dị n’Imerienwe n’Okpuru Ọchịchị Ngor-Okpala nke ImoRead More →